पुर्ब प्रधान्मन्त्री बाबुराम भट्टराई भन्नु हुन्छ "ओली भाइरस घातक रोग हो;यो अझै निर्मूल भएको छैन। पुन: षडयन्त्र हुनेछन्,सतर्क रहौं!" -
२०७८, ३० जेष्ठ आईतवार ०२:३० June 13, 2021 clickonLeaveaComment on पुर्ब प्रधान्मन्त्री बाबुराम भट्टराई भन्नु हुन्छ “ओली भाइरस घातक रोग हो;यो अझै निर्मूल भएको छैन। पुन: षडयन्त्र हुनेछन्,सतर्क रहौं!”
काठमाडौं – हिजो गण्डकी प्रदेशमा भएको राजनैकित प्रतिस्प्रधालाई लक्षित गर्दै पुर्ब प्रधान्मन्त्री बाबुराम भट्टराईले पोखरामा नेकपा एमालेको निर्लज्ज षड्यन्त्र र जालझेल तत्काललाई परास्त भएको बताएका छन। साथै षड्यन्त्रहरु फेरी पनी दोहरिने भन्दै सतर्क रहन बताएका छन।
पोखराको राजनितीलाई लिएर प्रधान्मन्त्री बाबुराम भट्टराईले दृढतापूर्वक संघर्ष गर्ने एमालेका सांसद र अन्त्यमा आसन्न प्रदेशसभा विघटनविरूद्ध उभिने एमालेका सांसदलाई वधाइ समेत दिएका छन। साथै उनले पोखरामा खड्गप्रसाद एण्ड कम्पनीको निर्लज्ज षड्यन्त्र र जालझेल तत्काललाई परास्त भएको बताएका छन।
पोखरामा खड्गप्रसाद एण्ड कम्पनीको निर्लज्ज षड्यन्त्र र जालझेल तत्काललाई परास्त भएको छ। दृढतापूर्वक संघर्ष गर्ने एमालेइतर दलका सांसद र अन्त्यमा आसन्न प्रदेशसभा विघटनविरूद्ध उभिने एमालेका सांसदलाई वधाइ! ओली भाइरस घातक रोग हो;यो अझै निर्मूल भएको छैन। पुन: षडयन्त्र हुनेछन्,सतर्क रहौं!
अाफ्नो ट्विटरमा पुर्ब प्रधान्मन्त्री भट्टराई लेख्छन, “पोखरामा खड्गप्रसाद एण्ड कम्पनीको निर्लज्ज षड्यन्त्र र जालझेल तत्काललाई परास्त भएको छ। दृढतापूर्वक संघर्ष गर्ने एमालेइतर दलका सांसद र अन्त्यमा आसन्न प्रदेशसभा विघटनविरूद्ध उभिने एमालेका सांसदलाई वधाइ! ओली भाइरस घातक रोग हो;यो अझै निर्मूल भएको छैन। पुन: षडयन्त्र हुनेछन्,सतर्क रहौं!“
२०७८, २४ जेष्ठ सोमबार ०१:५७ June 7, 2021 clickon
२०७८, ५ असार शनिबार १२:३९ June 19, 2021 clickon
कोरोना अपडेट – काठमाडौं उपत्यकामा १९३५ मा सङ्क्रमण पुष्टि
२०७७, २९ आश्विन बिहीबार १६:४१ October 15, 2020 clickon